Ixabiso loVavanyo lweWebhusayithi lwaSimahla | Martech Zone
Ixabiso loVavanyo lweWebhusayithi lwaSimahla
NgoLwesithathu, Juni 13, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
Le yingxoxo-mpikiswano eqhubeka ukuba nomsindo xa isiza kwi-Intanethi… kutheni kufanele ukuba ndihlawule isisombululo xa ndingasebenzisa esimahla? Sisebenzisa uninzi lwezicelo zasimahla- kodwa sinikwe amava ethu kwishishini, ndicinga ukuba sikhetha umthetho. Njengearhente, sisebenzisa ngokupheleleyo itekhnoloji esiyifumana iluncedo kwaye siyibeka ekusebenzeni ukunceda abathengi bethu.
Amaxesha amaninzi sibona abathengi bethu besebenzisa izisombululo zasimahla kwaye abanalo ulwazi lokusebenzisa okanye ukuqonda impembelelo enokuthi ibenayo kwimizamo yabo yentengiso iyonke. Kule meko, abantu kwi Maxymiser Ngaba wenze uhlalutyo lokuhlawulwa ngokuchasene nokuvavanywa kwewebhusayithi yasimahla kwaye wafumanisa ukuba abathengi abavavanyiweyo abahlawulweyo bafumane iziphumo ezingcono ezingama-600%. Ayifanelanga ukuba yothuse, nangona kunjalo. Iqonga elikhulu ngokwesiqhelo lineengcali ezikunceda uqhube iziphumo usebenzisa iqonga labo. Ngamanye amagama, yeyona nto banomdla kuyo wokuqinisekisa ukuba usebenzisa ngokupheleleyo isicelo sabo ukuze ufumane imbuyekezo enkulu kutyalo-mali. Isicelo simahla asiboneleli ngaloo nto!
tags: vavanyouvavanyo freemaxymiserixabisoukubuya kutyalo maliuvavanyoUvavanyo lwewebhusayithi
Imikhwa yokuthenga kwangaphambili kwabathengi